( စိုးရိမ်မိတယ် ကလေးရယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( စိုးရိမ်မိတယ် ကလေးရယ် )	8
( စိုးရိမ်မိတယ် ကလေးရယ် )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Apr 7, 2015 in Creative Writing, Poetry | 8 comments
လာမယ့် နက်ဖြန် သဘက်ခါ
သင်္ကြန်ဆိုတာ လာတော့မယ် ၊
ဘယ်သူရှုံးသလဲ ? ဘယ်သူပုန်းမလဲ ?
သတိထားလို့ဖြင့် ပျော်စေချင် ။
Alinn Z says: ဘယ်သူ ပုန်းပုန်း မပုန်းပုန်း… ကျနော်ကတော့ ရန်ကုန်ကနေ ပြေးထွက် ရှောင်ပုန်းမယ်…
သဂျန်တွင်းးးး သံလွင်မြစ်ကမ်းစပ်မှာ ထန်းရည်စစ်စစ်ကလေး ဘေးချပြီး..
ဒေါနတောင်တန်းကြီးများရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ သံလွင်ချော့တဲ့ တေးနဲ့…
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်ပါမယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ငါကလည်း ဧရာဝတီဒုတိယမြစ်ကျဉ်းနားက စင်းခန်းရွာကလေးမှာ
စကားမပိတပီကချင်မလေးရယ် အေးဆေးပေါ့ကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ကျုပ်​က​တော့ ဘယ်​သူ့အတွက်​မှ မစိုးရိမ်​ပါဘူး ။ ကိုယ့်​အတွက်​ကိုပဲ စိုးရိမ်​တယ်​ ။ မဟုတ်​ရင်​ သီးမခံတတ်​တဲ့ ဗီဇ ​ကြောင့်​ သင်္ကြန်​ဆို အပြင်​မထွက်​တာများတယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: သင်္ကြန် နှစ်ဦး တူးပို့ တူးပို့…. တူးမာ ရဲ့ နော်ဗျာ….
သင်္ကြန် မယ်များ….မူးလို့ ကွဲလို့…အကုန်ဖေါ်တယ်ဗျာ…။
မျိုးစောင့် ကိုကို ကြည့် မ၀သေးလို့….
နောင်နှစ်မှာလည်း မျိုးစောင့် အုံးမတဲ့….
အာပလာတွေပါ….။ Credit to San Maung (Scuba Som)
lu lu says: သက်တမ်းကုန်လို့ သေတော့မယ်သင်္ကြန် တခါမှမလည်ဖူးဘူးး
Ma Ei says: ပုံထဲက ကလေးမ ဆိုးဝါးချက်
အကောင်းဆိုလဲ ကောင်းမယ် မထင်တော့…
အောင် မိုးသူ says: မိမိကိုယ်သာထိန်းသိမ်းရမှာပါပဲ။
မြစပဲရိုး says: ကိုမျိုး
နွယ် ဇာတ်လမ်း က ဘယ်လိုလဲ။
ဇာတ်ပေါင်းခန်း မှာ ပေါင်းရသည်ဖြစ်စေ၊ မပေါင်းရသည် ဖြစ်စေ Happy Ending ဖြစ်ပါစေရှင်။
ကဲ ချင် သူများ အတွက်တော့ ၁၂ရာသီ ပွဲ ရှိနေတော့ တာမို့ သင်္ကြန် ဆိုတာလဲ နာမည် ပျက်ရှာခဲ့ပြီ။
ဒီနှစ် ကွန်ဒုံ နဲ့ တားဆေး တွေ ရောင်းတာ တား သတဲ့။
ဒီတော့ ကဲ တာ ရပ် မတဲ့လား။
မိန်းကလေး များ အတွက် အမျိုးစောင့် သူရဲကောင်း ကြီး ဒီလို နေရာမှာ အသံတိတ်နေပေါ့။